Togo : Nandresy ny fahalalahan’ny fampahalalam-baovao, saingy mitohy ny fifandonana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Aogositra 2019 12:11 GMT
(Lahatsoratra nivoaka ny 29 Martsa 2013)
Nosoratan’i Madeleine Bair, tompon’andraikitry ny fantsona ho an'ny zon’olombelona ao amin’ny fikambanana WITNESS ity lahatsoratra ity.
Natambatra sy navoaka tao amin’ny kaonty YouTube sy Twitter ireo lahatsarin’olon-tsotra momba ny hetsi-panoherana tamin’ny volana Febroary sy Martsa 2013 tany Togo, izay amin’ny teny Frantsay avokoa. Azo jerena ao amin’ny Fantson'ny Zon'Olombelona ao amin’ny YouTube ny fifantenana feno ireo lahatsary ireo.
Faly tamin’ny fanapahan-kevitry ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana tamin’ny fandàvana ny lalàna izay nametra ny fahalalahan’ny fampahalalam-baovao ireo mpanao gazety avy ao Togo, firenena iray any Afrika Andrefana. Hanome ny fahefana ho an'ny sampandraharaha mpandrindra ny fampahalalam-baovao ao amin’ny firenena hanasazy ireo mpanao gazety, ny fanasivanana sy ny fanakatonana ireo sampam-baovao tsy manana didy avy any amin'ny fitsarana ity lalàna ity.
Naneho hevitra momba ny lalana nankatoavina tamin’ny volana Febroary (2013) ireo mpanao gazety Togoley tamin’ny alalan'ny fanapahana ny fampahalalam-baovao sy ny fitokonana teo anoloan’ny lapam-panjakana ny volana Martsa (2013). Nandrakitra ireo fihetsiketsehana sy ny fihetsik’ireo manampahefana ny lahatsary nataon’ireo olon-tsotra mpanao gazety sy ny vondrona mpiaro ireo mpikatroka. Nahitana ny fampiasana herisetra tafahoatra tao anatin'izany, izay nitarika fahasemporana tamin’ny alalan’ny etona mandatsa-dranomaso sy ireo ratra vokatr’ireo bala fingotra.
Satria efa nanakaiky ny fifidianana dia nitohy ny fahazarana nataon'ireo mpitondra Togoley amin'ny famoretana ny asa fanaovan-gazety sy ireo mpanohitra izay ao anatin'ny fikasana hanakana mandrakariva ny dingana ara-demokratika sy ny fifikirana amin’ny fahefana.
Nandritra ny taompolo dimy, antoko tokana ihany, ny Fivondronan'ny Vahoaka Togoley (RTP) no nitondra io firenena kely io. Tany amin’ny taompolo 1990, nankatoa ny fanavaozana demokratika i Togo, anisan’izany ny fifidianana ahitana antoko politika maro. Saingy tsy mbola nahavita nanatanteraka ireo fanovana ireo izy, nomarihin’ny fifandirana ara-politika sy ny herisetra ary ny famoretana ny antoko mpanohitra ny fifidianana rehetra nisy.
Nitovy tsy nisy hafa tamin'izany ihany koa no nitranga tamin’io taona io. Ho an’ireo fifidianana nokasaina natao ny faran’ny volana Martsa (2013), mpikambana miisa 27 avy amin’ny fiaraha-mitantan’ny mpanohitra, anisan’izany ny Filohan’ny Fiaraha-mientana Nasionaly ho an’ny Fanovana, no nosamborina noho ny fiampangana nifandraika tamin’ny haintrano niseho tao an-drenivohitra Lome. Norarana ihany koa tamin’ny baomba mandatsa-dranomaso sy ny bala fingotra ireo fihetsiketsehana manohitra ireo fisamborana ireo. Nahemotra noho izany ny fifidianana.
Niatrika sakana hafa ireo mpanao gazety tany Togo na dia teo aza ny fanapahan-kevitry ny fitsarana tamin'ny fanafoanana ny famerana ny asa fanaovan-gazety. Namaritra ny gazety Togoley ho ‘’tsy malalaka’’ ny fikambanana Freedom House, tsy noho ny famerana araky ny lalàna, fa noho ny fandrahonana sy ny tsimatimanota amin’ny fanafihana ny gazety. Nahatonga ny fanaovan-gazety an-tserasera ho manandanja kokoa ny sivana ofisialy na ny fampiharana azy tsisatry. Araka ny voalazan’ilay mpanao gazety Noel Tadégnon hoe: inoana fa hitodika any amin’ny aterineto ireo mpanao gazety mba hialana amin’ny sivana ataon’ny governemanta raha mbola mitohy ihany ny ady.
Tsidiho ny lisitry ny famakiana lahatsary ao amin’ny fantson'ny zon’olombelona raha te hahita ireo lahatsary handraisana anjara maromaro momba ny famoretana ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety sy ny mpanohitra any Togo ianao . Vokatry ny fiaraha-miasa teo amin’ny fikambanana Witness sy ny Storyful, nampiantranoana tao amin’ny YouTube ireo lahatsarin’ny Human Rights Channel (Fantson'ny Zon'Olombelona).